Global Voices teny Malagasy » Mampidi-doza ny fiainana manokan’ireo mpampiasa azy ny Microsoft: Tsy misy HTTPS any amin’ireo firenena Arabo, Iran · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Avrily 2011 4:30 GMT 1	 · Mpanoratra Anas Qtiesh Nandika miora
Sokajy: Alzeria, Bahrain, Iràna, Jordania, Libanona, Maraoka, Syria, Fitsipika
Namorona sy nanaparitaka torolàlana tena ilaina amin'ny fiarovana ny tsiambaratelo ao amin'ny aterineto  ny Accessnow. Tamin'ity maraina ity dia nisy mpianatra Siriana iray any Jordania nifandray tamiko tao amin'ny twitter ary niteny fa tsy afaka manaraka ilay torolàlana ahafahana mampiasa ireo HTTPS amin'ny kaonty Hotmail-ny izy. Nangataka azy aho handefa amiko ny sarin'ny fàfana  ary niroso tamin'ny fanairana an'i Jillian York any amin'ny Foibe Berkman Center mikasika ity raharaha ity.
York, izay sady manampy ihany koa amin'ny Fisoloana vava, dia nizotra tamin'ny fandalinana bebe kokoa ny mikasika ity raharaha ity . Ny ahiahiny voalohany dia tany amin'ireo sazy nampiharina tamin’ Syria mikasika ny fanondranan'entana, nefa nanamarika ilay mpampiasa fa any Jordana izy ary tany Jordania ihany koa ny mikasika ny momba azy no nitranga. Manala ny mety hisian'ny olana ateraky ny fanaraha-maso be loatra ny resaka fanondranan'entana , araka izany dia nandinika bebe kokoa ilay olana izy:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/04/02/15584/
 torolàlana tena ilaina amin'ny fiarovana ny tsiambaratelo ao amin'ny aterineto: https://www.accessnow.org/pages/protecting-your-security-online
 ny sarin'ny fàfana: http://twitpic.com/4d4be3
 fandalinana bebe kokoa ny mikasika ity raharaha ity: http://jilliancyork.com/2011/03/25/microsoft-hotmail-no-https-for-arab-iranian-users/